Susa igama lomsebenzisi kusikrini sokungena ngemvume se-Skype | Kusuka kuLinux
Yoyo | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ezweni lanamuhla lapho sihamba khona, lapho ubuchwepheshe ne-Intanethi sekuphenduke isinkwa sethu sansuku zonke, ukuxhumana nomphakathi kanye nezinhlelo zokuthumela imiyalezo kufana nokwandiswa kobuntu bethu.
Ngaphakathi kwezinhlelo ezisivumela ukuxhumana ngesikhathi sangempela, Skype ibekwe endaweni evelele, ikakhulukazi lapho manje kufanele isetshenziswe esikhundleni sokulahlekile Isilayezi se-Microsoft se-MSN.
Kepha i-Skype iyi-multiplatform, futhi singabasebenzisi abaningi be- Linux ukuthi siyisebenzisela izici ezisinikeza zona, okungenani size sibe nenye indlela enhle nephelele ngaphakathi kwe-Linux ne-Free Software.
Abantu banelukuluku ngokwemvelo, futhi imvamisa sisebenza ngemodi efundwayo eminingi.Ngubani phakathi kwalabo abakhona ongakaze abe ne-akhawunti engaphezu kweyodwa ku-Skype?
Noma ngubani ongenasono ukuphonsa ikhophi lakhe le-Windows 8 Professional ngefasitela 😉
Kunezikhathi eziningi lapho sijatshulelwa khona phambi kwe-PC yethu noma sisebenza ekusatshalalisweni kweLinux, lapho sivula i-Skype noma ukubhekabheka noma ukuxhumana nomuntu ikakhulukazi. Ukuthi umuntu angaba ngumngani, isihlobo esiseduze noma esikude, noma uthando oluyimfihlo nolungakhulumeki.
Futhi kulapho kufika khona umzuzu oyingozi noma ongakhululekile, Lapho sivula i-Skype sibona ukuthi umsebenzisi noma abasebenzisi bethu bavela kanjani kusikrini sokungena ngemvume, futhi uma siphelezelwa ngumuntu esingafuni ukubona lelo gama lomsebenzisi eliyimfihlo le-Skype, kuzoba nzima ukulifihla.
Ngalesi seluleko esilula, sizobona ukuthi singasigcina kanjani njalo isikrini sokungena ngemvume se-Skype sihlanzekile, ukuze abasebenzisi endaweni yethu abasebenzisa i-PC yethu bakwazi ukungena ku-Skype ngaphandle kokubona lowo omunye umsebenzisi esingafuni ukumfundisa.
Ngiyabona ukuthi leli thiphu lisebenza futhi ekuhlanzeni isikrini seseshini ngaphandle kokuthola isisusa saso 😉
Lapho uvula i-Skype sithola ukuthi isibonisa umsebenzisi wokugcina ongene ngemvume, kimi futhi ngokwesibonelo ibizwa ngokuthi iManYoyo
Ukususa igama lomsebenzisi kusikrini sokungena ngemvume kalula Siya enkombeni yethu yangasese, sinika amandla amafayela afihliwe ukuthi akhonjiswe, futhi ngaphakathi kwesiqondisi seSkype sisusa ifolda yalo msebenzisi.
Siphinda lesi sinyathelo nabasebenzisi abaningi njengoba sinakho futhi sifuna. Ngalokhu sizophinda sibe nesikrini sokungena ngemvume noma isikrini sokungena ngemvume se-Skype sihlanzekile.
Ekungeneni kwethu okulandelayo, kuzokwakhiwa ifolda entsha enegama lomsebenzisi wethu ku /home/usuario/.Skype.
Izinto ezilula ezenza impilo yethu ebonakalayo ikhululeke kakhudlwana, futhi uyazi, vele usebenzise le thiphu ngezinhloso ezinhle 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Susa igama lomsebenzisi esikrinini sokungena ngemvume se-Skype
Uyemukelwa ethimbeni lobhuti 😀
Ukuthi lokho…. enye indoda enempandla yeklabhu 😛
Ngelinye ilanga amadoda anempandla azobusa umhlaba, uxwayisiwe. 😉
LOL! Ngicabanga kanjalo.
Izobe ibukeka njengendlu yezindela yamaBuddha.
U-Ostia Yoyo ku <Linux, kwangathi ama-Apocaleches angakubamba uvumile!
Ukukhethwa kweWindows, uzobona kwesinye isikhathi ngithi iwindi kuma-windows, lapho-ke, uma ngiphonsa u- "window" ngefasitela. ... Ventanainception
Ngicabanga ukuthi iXeroxception ingangcono.
Kufanele unikeze i-namesake hazing yakho hahaha XD
Ake sibheke lapho ngizikhuthaza ukuthi "ngicele intambo" ku-Elav naseKZKG ^ Gaara ukuze abe ngumhleli 😉
Uzokwamukelwa kakhulu 😉
Amandla kaGregorio !! 😛
Impela… uzokwamukeleka kakhulu!
I-Yoyo ku-FromLinux? Ucabanga ukuba ngumbhali?
I-Linux kakhulu iyazamazama, iyazamazama.
#Ngiyavuma angikaze ngisebenzise i-Skype, futhi angizizwa ngifuna ukuyenza i-xD
Akukhona ukuthi ngiyisebenzisa kaningi, kepha nginabantu abaningi ku-Skype futhi iyindlela izivakashi zami ezihlanganyela ngayo emsakazweni wami oku-inthanethi 😉
# Ngiyavuma ukuthi nginabo bonke abesifazane ku-skype XD kuphela
Lapho umngani engangibuza ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho evala i-Skype, umsebenzisi uzosuswa ukuze umyeni wakhe angazi ukuthi uyisebenzisile, i-XD!, Engikwenzile kwakudala iskripthi esenza kahle lokho okuchazwe kule ndatshana, lapho ukuvala i-skype kususe ifolda.
okuthunyelwe okuhle kakhulu futhi kuchazwe kahle 🙂
Imininingwane emihle ye-xD, ngikwenze lokho kaningi ekususeni leyo folda ye-skype lapho ngangikubuntu 11.10 ngoba inginike ukwehluleka kokungena ngemvume ngakho-ke bekufanele ngiyisuse bese ungangena ngaphandle kwezinkinga.
I-Psi + isekela izingcingo zezwi, iGajim isekela izingcingo zezwi nezevidiyo, uJitsi aze akuvumele ukuthi urekhode umsindo ... ngezinketho nge-software yamahhala ngeke kube, futhi kungekudala sizoba neTox. Uma abasebenzisi be-software yamahhala singabakhuthazi, angazi ukuthi ngubani ozokwenza.
Ngendlela, angisusi ekungeneni. Idatha ilusizo kakhulu kulabo abasebenzisa i-Skype futhi kubukeka njengesimo esichaziwe 🙂
Akukona okokukhuthaza noma cha, kumayelana nokukwazi ukuxhumana nomhlaba wonke!
Futhi uma ungayikhuthazi, umhlaba wonke uzokwazi kanjani ukuthi ikhona? 😛
Vele uyabakhuthaza, kepha abantu bayeka ukusebenzisa izinto ze- "geek", ikakhulukazi labo abasebenzisa windows :).
Futhi bonke bengamakhasimende weJabber / XMPP, okungukuthi, basebenzisa indinganiso ebavumela ukuba bakhulume bodwa, nokuthi akekho umuntu ophoqeleka ukusebenzisa uhlelo olufanayo olusetshenziswa ngumakhelwane ukuze akwazi ukukhuluma nabo ! 😉
Phendula ku-K '
O, futhi anginayo noma anginayo i-akhawunti ku-shit Skype, futhi angifuni.
Uma abasebenzisi be-software yamahhala bengavikeli isoftware yamahhala uqobo, noma amazinga avulekile, angazi ukuthi ngubani ozokwenza ...
Ngicabanga ukuthi kunephutha lapha. Ezinye izindlela zikhona, futhi yebo, i-Skype kungenzeka ingavuleki, kepha inhloso ukukhombisa ukuthi ingasetshenziswa naku-GNU / Linux futhi.
Ngeshwa kusebenza kanjalo. Iningi lomndeni wami lisebenzisa i-Facebook futhi njengoba ngifuna basebenzise iDiaspora, Identi.ca, noma iklayenti leJabber, angikwazi ukukwenza ngoba abanandaba ukuthi ivulekile noma ivaliwe, iqiniso lokuthi wonke umuntu uyisebenzisa. sebenzisa, abangane babo nomndeni.
Uma "wonke umuntu emsebenzisa" omunye, kungenxa yokuthi othile uqale ukuyisebenzisa ngolunye usuku, futhi ukutshela abanye "sebenzisa lokhu, ukuze sikwazi ukukhuluma."
Uma kungekho muntu owenza umzamo ofanayo wezinhlelo ezivulekile, sinakho okubi ...
Ahh ... inkinga yaphakade ...
Ngabelana ngokwashiwo ngu-elav ...
Akunakuba yiqiniso ngokwengeziwe.
Ngivumele isigaba esincane, uma ungenankinga.
Inhloso yalokhu okuthunyelwe akukhona ukuphikisana ngesoftware yamahhala noma ephathelene nokuphathelene, mayelana nokuthi usebenzise i-Skype noma ezinye izindlela zamahhala kuyo.
Inhloso yokuthunyelwe bekumane, ukuthi usihlanza kanjani isikrini sokungena ngemvume se-Skype, akusekho, noma kungaphansi, lokho kulula.
Konke okunye kungenye impikiswano futhi kuyaphuma ebhodweni.
I-Yoyo, angihlosile ukwenza umsindo noma okuthile okunje ngokuphawula kwami, bekuwukuthi nje, ukuphawula, okukhombisa ukuthi kukhona isoftware yamahhala ezothatha isikhundla seSkype. Njengoba ngishilo, umnikelo wakho ubonakala uphelele ekuphambukiseni ukubheka okufuna ukwazi.
Ukuphawula kwami ​​kwangaphambilini bekungokomsebenzisi K '
Noma ngubani ongenasono, hlanza i-flash player kwi-distro yakhe.
Usho ukuthini "NGENKANI" ??? Ngisebenzisa iPidgin futhi ngiyajabula ngokuxhuma kwi-akhawunti yami ye-Hotmail (engiyigcinayo ngenxa yezizathu zomsebenzi). Yize ngingenayo ingqungquthela yevidiyo engangithinti ngoba kulo msebenzi angiwudingi. Ukuxoxa nokuthumela nokwamukela amafayela kwanele kimi. Futhi ngePidgin kuhamba kahle. Ukuphela kwento ukuthi bekufanele ngisebenzise i-msn-pecan plugin ngoba leyo eza ngokuzenzakalela kunezimbungulu ezithile.
Ingabe insizakalo yemiyalezo esheshayo yeWindows Live Messenger ayifanga? Ngizamile Ukuzwela lapho ngisebenzisa i-hotmail yami yakudala futhi bonke oxhumana nabo ebenginabo nabasusiwe basusiwe.
Yebo, bathe ngeke isasebenza, kepha ngiyaqhubeka nokusebenzisa iPidgin bese ngixhuma kwi-akhawunti yami ngaphandle kwezinkinga. Futhi umuntu engisebenza naye wamqinisekisa ukuthi asebenzise iPidgin futhi (ephikisa ngokuthi iSkype ibisinda kakhulu) futhi wenza kahle.
bagcina i-api, kuze kube ngu-2014 ngaphezulu noma ngaphansi, lapho-ke kuzodingeka sidlule ku-skype, ngenkani ..., ngiyethemba bazokhipha i-api ngisho nengxoxo!
"Abantu ngokwemvelo banelukuluku lokwazi, futhi sithambekele ekusebenzeni ngemodi yokwenza okuningi. Ubani phakathi kwalabo abakhona ongakaze abe ne-akhawunti engaphezu kweyodwa ye-Skype?"
Mina. I-Google Hangouts isebenza kahle emihlanganweni yami eku-inthanethi.
Ungayilawula kanjani i-VLC kusuka ku-Android yakho